Home » သတင်း » တောက်ပသော, ကျယ်ပြန့်, ပိုမိုပေါ့ပါး - LITEPANELS Gemini နှင့်အတူဘားပေါ်ပေါက်
တောက်ပသော, ကျယ်ပြန့်, ပိုမိုပေါ့ပါး - LITEPANELS Gemini နှင့်အတူဘားပေါ်ပေါက်
Los Angeles - စက်တင်ဘာ 12, 2017 - Litepanels (R), ရုပ်ရှင်, ဓာတ်ပုံပြပွဲနှင့်ထုတ်လွှင့်စက်မှုလုပ်ငန်းများနှင့်တစ်ဦးအဘို့ကို LED အလင်းရောင်အတွက်ရှေ့ဆောင်တစ်ဦး Vitec အလွန်အမင်းပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ခြင်းနှင့်တိကျသောအရောင်ညှိနှိုင်းမှုကယ်နှုတ်တော်မူတစ်ခု All-သစ်ကို2× 1, မိုဃ်းလင်းပေါင်းစပ် RGB-WW ပျော့ panel က, အဖြိုက်နက်, နှင့်အနီရောင်အစိမ်းရောင်-အပြာအယ်လ်အီးဒီ - Group မှအမှတ်တံဆိပ်, ယနေ့ Litepanels Gemini မိတ်ဆက်ပေးသည်။ အဆိုပါ Gemini ပျော့ panel ကိုစစ်မှန်တဲ့ full-spectrum ကိုအဖြူရောင်အလင်းနှင့်မည်သည့်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်အလင်းရောင်လျှောက်လွှာကိုက်ညီဖို့ဒီဇိုင်းထိန်းချုပ်မှုရွေးချယ်စရာတစ်ခုကျယ်ပြန့်ရွေးချယ်မှုထုတ်လုပ်သည်။ IBC2017 မှဧည့်သည်များအတွက် Litepanels အပေါ် Gemini ရဲ့အရည်အသွေးမြင့်အလင်း output ကိုမှာသီးသန့်ပထမဦးဆုံးအကြည့် (12.E65) ရပ်ရလိမ့်မယ်။
ငါတို့သည်ငါတို့၏မူလ 1 × 1 panel ကိုမိတ်ဆက်လိုက်တဲ့အခါ "ကျနော်တို့အစဉ်အမြဲအလင်းရောင်စက်မှုလုပ်ငန်းရှုခင်းပြောင်းလဲနှင့်အခြေခံကျကျ DPS အလင်းရုပ်ရှင်နဲ့ရုပ်မြင်သံကြားစီမံကိန်းများကိုဖို့ရှေးခယျြသှားရာလမျးပြောင်းလဲသွားတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်မူရင်းကဲ့သို့သောကျယ်ပြန့်, ပျော့ပျောင်းသောအလင်းအရင်းအမြစ်တောင်းပေမယ့်တစ်ဦး2× 1 ပုံစံအချက်အတွက်ပါပြီ။ ကျနော်တို့ Gemini နှင့်အတူကယ်လွှတ်ကြပြီ, ငါတို့တစ်ဖန်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်အလင်းရောင်များအတွက်ဘားထမြောက်တော်မူပါတယ်, "Pat Grosswendt, Litepanels ၏ပူးတွဲတည်ထောင်သူနှင့်ပရော်ဖက်ရှင်နယ် gaffer ကဆိုသည်။ "အခုဆိုရင်အသုံးပြုသူများအတူတူဂိုဏ်းမှမျိုးစုံအလင်းအိမ်မလိုဘဲမိမိတို့၏အလိုရှိသောအလင်းရောင် setup ကိုရရှိ၏အဆင်ပြေစေရန်ရှိသည်မဟုတ်သာ, ဒါပေမဲ့သူတို့မှာလည်း Gemini, စစ်မှန်သော RGB-WW panel ကအဖြစ်, အဖြူရောင်စက်မှုလုပ်ငန်းရဲ့အရှိဆုံးတိကျမှုနှင့်အတူ၎င်းတို့၏အခွက်တဆယ်ကိုလငျးဦးမည်စိတ်ချပါအရာကြွင်းသမျှနိုင်ပါတယ် အလင်း။ "
ယခုတိုငျအောငျ, အရှိဆုံး2× 1 ပြား၏အသုံးပြုသူများသည်မလိုလားအပ်သောအရောင် spikes ဖန်တီးနိုင်သော, အနီ, အစိမ်း, အပြာရောစပ်ခြင်းဖြင့်အဖြူအလင်းအောင်မြင်ပါပြီ။ Gemini အသုံးပြုသူများသည်တစ်နေ့-to-အဖြိုက်နက်အလင်းအခြေခံအုတ်မြစ်ပေးခြင်း, ပြီးတော့ထုအပြည့်အဝ, 360 ဒီဂရီအရောင်ဘီးတစ်လျှောက်လုံးအရောင်ချိန်ညှိဖို့သူတို့ကိုဖွင့်ခြင်းဖြင့်ဤပြဿနာကိုရှင်းလင်းစေပါတယ်။ ဤသည်အသုံးပြုသူများကိုမြန်မြန်ဆန်ဆန်နဲ့ရိုးရိုးပတ်ဝန်းကျင်အလင်းရောင်အခြေအနေများ၏ကျယ်ပြန့်အကွာအဝေးနှင့်ကိုက်ညီနိုင်မကိုဆိုလိုသည်။ ဥပမာတစျခုတိကျ White Balance ကိုအလွယ်တကူအစိမ်းရောင်ဖြည့်စွက်ခြင်းသို့မဟုတ်ဖယ်ရှားခြင်းအားဖြင့်အောင်မြင်နိုင်ရှိရာချောင်းကျွမ်းတယ်အလင်းရောင်နှင့်အတူဟောင်းဂိုဒေါင်ထဲမှာရိုက်ကူးခြင်းကိုခံရပေလိမ့်မည်။
Gemini သုံးအလင်းရောင်သည် Modes အတွက် LCD screen များနှင့်အတူ၎င်း၏လွယ်ကူသော-to-အသုံးပြုမှုကိုအလိုလိုသိ menu ကို interface ကိုတဆင့်ဒီပွိုပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ကမ်းလှမ်း:
• bicolor များအတွက်ဆက်စပ်မှုအရောင်အပူချိန် (CCT) Mode ကို, (မိုဃ်းလင်း tungsten မှ) ဖြင့် +/- အစိမ်းရောင်ညှိနှိုင်းမှု
က hue ရွှဲနှင့်ပြင်းထန်မှုကိုပူဇော်သက္ကာဘို့•အရောင် Mode ကို, (HSI) အပြည့်အဝအရောင်နဲ့ရွှဲထိန်းချုပ်ရေးအတွက်ထိန်းချုပ်မှု
လူကြိုက်များ gels အမျိုးမျိုးတက် dial နိုင်စွမ်းပေး• Gel Mode ကို,
အားလုံးသုံး Modes သာဆိုအရောင်ပြောင်းလဲမှုမရှိဘဲ 100 ရာခိုင်နှုန်းကနေသုညမှချောမွေ့အလင်းမှိန်ခြင်းနှင့်အတူအသုံးပြုသူများသည်ပြီးပြည့်စုံသောပြင်းထန်မှုထိန်းချုပ်မှုကိုဆက်ကပ်။ အသုံးပြုသူများမြန်ဆန်အဆင်ပြေပြန်လည်သိမ်းဆည်းဘို့, ပြင်းထန်မှုအပါအဝင်သူတို့ရဲ့အကြိုက်ဆုံးအလင်းရောင် attribute တွေ, ကယ်ဖို့ရလာဒ်ကဒိသတ်မှတ်နိုင်ပါတယ်။
Gemini ပထမဦးဆုံးအနေနဲ့စက်မှုလုပ်ငန်း DMX (5-pin ကို XLR သို့မဟုတ် RJ45), ကြိုးမဲ့ DMX မှတဆင့်ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်အဝေးထိန်းကမ်းလှမ်း (နှစ်ဦးစလုံးစံ 512 protocol ကို အသုံးပြု. ), သို့မဟုတ် Bluetooth ။ Gemini အဝေးမှ Apple ထုတ်ကုန်များအတွက် Litepanels SmartLite သို့မဟုတ် SmartLite ဒါရိုက်တာ app များကို အသုံးပြု. ထိန်းချုပ်နိုင်ပါတယ်။
မကြာမီကလွတ်လပ်သောစမ်းသပ်ခြင်း Gemini အဖြိုက်နက်ထဲမှာမိုဃ်းလင်းနှင့် 97 အတွက် 99 ၏ TLCI / CRI အဆင့်ဆင့်တိုင်း, ထူးချွန် photometric စွမ်းဆောင်ရည်ကယ်တင်တတ်၏ကြောင်းသရုပ်ပြခဲ့သည်။ နောက်ဆုံးမှာအရောင်ဆုံးမခြင်းဘို့လိုအပ်ကြောင်းဖျက်သိမ်းရေးနှင့် postproduction အချိန်နှင့်ပိုက်ဆံချွေတာ - ဤအလင်းရောင်ပညာရှင်များယုံကြည်စိတ်ချရသောခြွင်းချက်အရောင်နဲ့လက်တွေ့အသားအရေတန်ချိန်အောင်မြင်ရန်နိုင်သည်ကိုဆိုလိုသည်။
ယင်း၏ On-board ကို power supply နှင့်အတူ, Gemini ပြင်ပလှေငြိမ်လိုအပ်ကြောင်းပြားယှဉ်ပြိုင်ခြင်းထက်သိသိသာသာပေါ့ပါးဖြစ်ပါတယ်။ ပြင်ပပါဝါအစိတ်အပိုင်းများဘို့လိုအပ်ကြောင်းမရှိဘဲ, panel ကိုကအလွယ်တကူသယ်ယူခြင်းနှင့်နည်းပါးလာ cable ကိုဆက်သွယ်မှုနှင့်အတူလျှင်မြန်စွာအကြံအဖန်ခံရဖို့ခွင့်ပြု, သိသိသာသာပိုပြီးတမျးဖြစ်ပါတယ်။ Gemini ပြားလည်းဘက်ထရီပါဝါ (3-pin ကို XLR 28 VDC) မှ run နိုင်ပါတယ်, ဒါမှမဟုတ်အာဏာကိုတစ်ဦးစက်မှုလုပ်ငန်း-စံ powerCON connection ကိုသုံးပြီးအခြား devices ထဲကနေ daisy-ချည်နှောင်နိုင်ပါသည်။
"ဟုအဆိုပါ Litepanels Gemini ၏အရောင်ရညျအသှေးကိုအလင်းရောင်မှိန်ခြင်းအထူးသဖြင့်အခါ, ငါ့ကိုတိကျစွာ applications များအမျိုးမျိုးအတွက်လက်ရှိအဖြိုက်နက်အလင်းရောင်သတင်းရင်းမြစ်ကိုက်ညီမှခွင့်ပြုပါတယ်။ ငါမယုံကြည်နိုင်လောက်အောင်ဖြစ်သည့်သုညမှလမ်းခရီးတရှောက်လုံး, မီးမှိန်နိုင်ပါတယ် "လို့ဆုရရိုက်ကူးရေးခေါင်းဆောင်အင်ဒရူး Dunn, BSc ကဆိုသည်။ "ကျနော့် gaffer, ဟိုဆေး Ruiz, ငါမယုံနိုင်လောက်အောင်လွယ် Gemini အကြံအဖန်ရှာပါ။ ၎င်း၏အလေးချိန်နှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါက၎င်း၏ output ကိုကိုကြီးမားတဲ့အချိန်ချွေတာကြောင်းကို On-set ကိုဘက်စုံပေးခြင်းကြောင့် ပို. ပင်ထူးခြားသောစေသည်။ "
Dunn Gemini တစ်တုံအဖြစ်ကောင်းစွာအလုပ်လုပ်တယ်, ထိုသို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အခွက်တဆယ်ဘို့တစ်ဝစွာအဖြစ်အသုံးပြုခံရဖို့လုံလောကျအပျော့ရဲ့ "ကဆက်ပြောသည်။ တဦးတည်းသီးခြားရုပ်ရှင်, ကြှနျုပျတို့သူတို့ကအကောင်းဆုံးဖြစ်နိုင်သမျှအလငျး၌ lit ခံခဲ့ကြသည်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဦးဆောင်မင်းသမီးများ၏အတွင်းစိတ်အလှတရားထုတ်ဆောင် ခဲ့. , သူတို့ခံစားရ (နှင့်သိကျွမ်း) အောင် Gemini သုံးစွဲဖို့နိုင်ခဲ့သည်။ Plus အား, ဒါကြောင့်လွယ်လွယ်ကူကူထူးခြားသောအဆင်းအရောင်တစ်အကွာအဝေးအတွင်း dial နှင့်နောက်ခံသို့သူတို့ကိုငါတပ်များမှစွမ်းရည်အတိမ်အနက်, texture, နှင့်မြင်ကွင်းတစ်ခုစိတ်ဝင်စားဆောင်ခဲ့လေ၏။ "
အားလုံး Litepanels ထုတ်ကုန်ကဲ့သို့ပင် Gemini အသုံးပြုသူများသည်အပိုဖန်တီးမှုအလင်းရောင်ထိန်းချုပ်မှုပူဇော်ဖို့, ထိုကဲ့သို့သောပျားလပို့ကို Grid နှင့်စပါးကျီတံခါးများအဖြစ် Light-ပုံဖော်ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ၏အပြည့်အဝကိုကြိုးတန်းပြည့်စုံစေသည်။ ဒီနှစ်ကုန်အသုံးပြုပုံ Litepanels ဖြစ်စေဒေါင်လိုက်သို့မဟုတ်အလျားလိုက်မျိုးစုံ Gemini ပြားသီးနှံများကိုပုံမှဖောက်သည်များကို enable လိမ့်မယ်တဲ့ mounting ဟာ့ဒ်ဝဲကိရိယာအစုံကိုလွှတ်လိမ့်မယ်။
အဆိုပါ Litepanels Gemini2× 1 panel ကို $ 4,440 (4,200 ယူရို) ၏အကြံပြုလက်လီစျေးနှုန်းမှာယခုရရှိနိုင်ပါပြီ။
Gemini နှင့်အခြား Litepanels ဖြေရှင်းချက်အပေါ်ပိုမိုသောအချက်အလက်များမှာရရှိနိုင် litepanels.com.
Litepanels တစ်ဦး Vitec Group မှအမှတ်တံဆိပ်, အနာဂတ်အတွက်မြင်ရွေ့လျားမှုရုပ်ပုံများ, ရုပ်မြင်သံကြားနှင့်အသံ-အမြင်အာရုံစက်မှုလုပ်ငန်းများအတွက် LED (အလင်း emitting diode) အလင်းရောင်ရှေ့ဆောင်သူကိုငါးပရော်ဖက်ရှင်နယ် gaffers နှင့်အင်ဂျင်နီယာများအားဖြင့် 2001 ခုနှစ်တွင်စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီးခဲ့သည်။ သူတို့ရဲ့သူဟာ Emmy (R) ဆုရနည်းပညာယခုကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းဘဏ်ဍာထောင်ပေါင်းများစွာ၏ပေါ်တွင်အသုံးပြုခဲ့ပြီးကမ္ဘာ့ဦးဆောင်ထုတ်လွှင့်သည့်အဖွဲ့အစည်းများအားဖြင့်ယုံကြည်စိတ်ချရခြင်းဖြစ်သည်။ Litepanels ခွက်တဆယ်နှင့်အလင်းရောင်ဒါရိုက်တာများအရမ်းလေးစားမိပါတယ်ကြောင့်တုန်ခါမှုတွေ-အခမဲ့, အရောင်တိကျမှု, အပြည့်အဝ-dimmable ပျော့အလင်းအိမ်၎င်း၏ suite ကိုချဲ့ထွင်ရန်ဆက်လက်။ ဤရွေ့ကားပတ်ဝန်းကျင်နဲ့သဟဇာတပြားပရော်ဖက်ရှင်နယ်အလင်းရောင်အတွက်စံနှုန်းသစ်တခု setting, ပါဝါငွေစုနှင့်ရှည်သောအသက်နှင့်ကိုယ်အဘို့အပေးဆောင်နိုင်ပါ။ နောက်ထပ်သတင်းအချက်အလက်များမှာတွေ့နိုင်ပါသည် Litepanels.com.
အဆိုပါ၏တစ်ဦးကလျှပ်တစ်ပြက် Vitec Group က
အဆိုပါ Vitec Group မှ plc ဟာအစာရှောင်ခြင်းပြောင်းလဲနေတဲ့နှင့်ကြီးထွားလာ "ပုံရိပ်ဖမ်းယူခြင်းနှင့်မျှဝေ" စျေးကွက်မှပရီမီယံ branded ထုတ်ကုန်များနှင့်ဝန်ဆောင်မှုများကိုဦးဆောင်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာပံ့ပိုးပေးသူဖြစ်ပါတယ်။
Vitec'' s ကိုဖောက်သည်ထုတ်လွှင့်, လွတ်လပ်သောအကြောင်းအရာဖန်တီးသူ, ဓာတ်ပုံဆရာများနှင့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ, ငါတို့လှုပ်ရှားမှုများပါဝင်ပါဝင်သည်: ဒီဇိုင်းထုတ်လုပ်ခြင်းနှင့်ကင်မရာကိုအထောက်အကူ, ကြိုးမဲ့စနစ်များ, စက်ရုပ်ကင်မရာစနစ်များ, prompters, အလင်းအိမ် LED, မိုဘိုင်းပါဝါ, မော်နီတာအပါအဝင်မြင့်မားသောစွမ်းဆောင်ရည်ထုတ်ကုန်များနှင့် software များဖြန့်ဖြူး နှင့်အိတ်; နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာဖြေရှင်းနည်းများ, တီဗီထုတ်လုပ်မှုအဖွဲ့များ, ရုပ်ရှင်သမားတွေနှင့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအဘို့စနစ်များကိုပေါင်းစပ်နှင့်ပစ္စည်းကိရိယာများငှားရမ်းအပါအဝင်ခြင်းနှင့်ပရီမီယံန်ဆောင်မှု။
ယင်းအသံလွှင့်လုပ်ငန်းနယ်ပယ်များတွင် Vitec Anton / Bauer က Autocue, Autoscript, ကင်မရာ Corps, Litepanels, OConnor, OFFHollywood, Paralinx, Sachtler, SmallHD: အရှိဆုံး, လေးစားဖွယ်ဆန်းသစ်နှင့်ဆည်းကပ်-ပြီးနောက်အမှတ်တံဆိပ်အချို့ကိုအတူတကွဆောင်တတ်၏ Teradekက The ကင်မရာ Store မှာ, သစ်သားကင်မရာနှင့် Vinten ။
နှုတ်ကပတ်တော်ကို Doc သို့ Link ကို: www.wallstcom.com/TheVitecGroup/170912VitecGroup.docx
ဓာတ်ပုံ Link ကို: www.wallstcom.com/TheVitecGroup/TheVitecGroup-Gemini.zip
ဓာတ်ပုံစာတန်းထိုး: အသစ်က Litepanels Gemini2× 1 Panel ကို၏ကုန်ပစ္စည်း Shots
တွစ်တာပေါ်မှာ Share: twitter.com/intent/tweet?text=.@VitecGroup%20@Litepanels%20Introduces%20Gemini%20for%20%23IBCShow%202017%20-%20https://goo.gl/dReKor%20@IBCShow
IBC2018 မှာဘော့ဒစ်ဂျစ်တယ် - ဇူလိုင်လ 17, 2018
Broadpeak® IBC2018 ပြသခဲ့သည်ကို Preview - ဇူလိုင်လ 17, 2018
DMC Interra စနစ်များ '' QC ဖြေရှင်းချက်နဲ့အတူအကြောင်းအရာအရည်အသွေးနှင့်လုပ်ငန်းစွမ်းဆောင်ရည်ကိုပိုကောင်းစေ - ဇူလိုင်လ 17, 2018
ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ Gemini ပေါင်းစည်းမှု LED PANEL LitePanels တိကျစွာအရောင်ထိန်းချုပ်မှု အဆိုပါ vitec အုပ်စုတစ်စု တီဗီနည်းပညာ က Ultra HD ဖိုရမ် ဗီဒီယိုကိုအင်ဂျင်နီယာချုပ်	2017-09-12
ယခင်: ကင်မရာ Tally ကိုဖြေရှင်းချက်အပေါ် TSL ထုတ်ကုန်များနှင့်အတူမြက်ချိုင့်မိတ်ဖက်
နောက်တစ်ခု: axon IBC မှာတိုက်ရိုက် IP ကိုအပြန်အလှန် အသုံးပြု. မရပါခင်းကျင်းပြပေးပါရန်
ဟေ့လုပ်ပြီး Buddy !, ငါသည်သင်တို့အဘို့ဤအချက်အလက်တွေ့ရှိခဲ့: ", တောက်ပကျယ်ပြန့်, ပိုမိုပေါ့ပါး - LITEPANELS Gemini နှင့်အတူဘားပေါ်ပေါက်" ။ http://www.broadcastbeat.com/brighter-wider-lighter-litepanels-raises-the-bar-with-gemini/: ဒီမှာက်ဘ်ဆိုက်လင့်ခ်ဖြစ်ပါတယ်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။